Ganacsiga Soomaalida ee Koonfur Africa - BBC Somali - Ganacsi
Ganacsiga Soomaalida ee Koonfur Africa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 Febraayo, 2013, 21:28 GMT 00:28 SGA
Magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Africa, waxay ka mid tahay goobaha ugu daran ee ‎Soomaalida ku dhaqan dalkaas ay dhibaatooyinka kala duwan ka soo gaaraan.
Soomaalida ganacsatada ee jooga tuulo u dhow magaalada Rustenburg.
Magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Africa, waxay ka mid tahay goobaha ugu daran ee ‎Soomaalida ku dhaqan dalkaas ay dhibaatooyinka kala duwan ka soo gaaraan. Dhowaan markii ‎deegaanka Marikana ay rabshaduhu ka dhaceen ee ay macdan qodayaasha shaqo joojinta ‎samaynayay isaga horyimaaden booliiska rabshadaha ka hortaga, ayaa dad gadoodsan ay ‎abaareen oo boobeen goobaha Soomaalidu ku ganacsanaysay.
Mid ka mid ah milkiilayaasha dukaamada Soomaalida lida ee Koonfur Afrika.
Waxaa taa ka daran in sanadihii ‎ugu dambeeyay ay dukaamada ku yaalla tuulooyinka ama obasiibooyinka loo yaqaan Location-ka ‎ay ku dhinteen ganacsato dhalinyaro u badan oo iibinaysay dukaamada ku yaalla goobahaas.
‎Cabdiraxmaan Koronto oo dhowaan magaaladaas booqday ayaa tagay qaar ka mid ah ‎dukaamada ku yaalla tuulooyinka ee Soomaalida lagu waxyeeleeyay oo labaatan iyo afartan ‎kilmomitir u jira magaalada Rustenburg. Cabdiraxmaan ayaa barnaamijkan ku diyaariyay isla ‎magaalada Rustenburg iyo laba tuulo ee uu booqday.